Ingqokelela yomnquma ekwindla-ebusika 2021 yifumane! | Bezzia
Ingqokelela yomnquma ekwindla-ebusika 2021 yifumane!
UMaria vazquez | 03/11/2021 18:00 | Ndinxiba ntoni
Elinye ixesha lonyaka sabelana nawe ngezindululo zika-Olive, ifemu yamaNgesi enesitayile somntu. A isimbo esilula esiphefumlelwe lilizwe eye yatsala ingqalelo yethu kwiminyaka engaphezu kwemihlanu eyadlulayo kwaye inkampani ihlala ithembekile kule ngqokelela entsha yasekwindla-ebusika ka-2021 evela kwi-Olive.
Hlala unyanisekile kwisitayile ukushiya iindlela ecaleni Sikholelwa ukuba kwihlabathi elixutywe nehlabathi njengeli siphila kulo, ngokungathandabuzekiyo eli liphawu lokuqaqambisa, awucingi? Ukuba uthanda iilokhwe zeplaid, ibhulukhwe ye-corduroy, iziketi zeentyatyambo kunye nejezi ezifudumeleyo, siyakumema ukuba ufumane izindululo zabo ezitsha.
Ngaphambi kokuba siqale ukuhlalutya ingqokelela yakho entsha, besifuna ukuqinisekisa ukuba ewe, loo nto iinqanawa eziqinileyo eziya eSpain. Ngenxa yeBrexit, iimeko zabo zitshintshile, kodwa ukuhanjiswa kuqinisekisiwe ngaphandle kokuhlawula irhafu okanye imisebenzi. Yaye zithini ezo meko? Iiodolo kufuneka zibe nexabiso eliphezulu le-180 (eya kunqabile ukuba uthenge ngaphezu kweengubo ezintathu) kunye neendleko zokuthumela ngoku zinexabiso elimiselweyo le-5 euro.
ingqokelela OI'21 Olive kaThixo
Ingqokelela entsha ye-Olive ihambisa obo bushushu buqhelekileyo kwiingqokelela zohlobo. Zombini i ibhulukhwe ye-corduroy esikiwe ngqo Njengazo ziphefumlelwe ibhulukhwe ye-momohiki yaseJapan yakudala, eyenziwe ngoboya kunye ne-ankle roll, ifanelekile ukusigcina sifudumele ngexesha leentsuku zasebusika ezibandayo. Zidibanise neehempe ezihonjisiweyo, izitsibi ezishushu kunye neeflethi njengoko isenza ifemu.
Esinye isinxibo esingaqhelekiyo silahlekile kwiingqokelela zefemu iilokhwe eziphothiweyo. Eli xesha leentandokazi ziyilo ezide kunye neepatheni ezivulekileyo, ezinqunywe ezinqeni kunye nemikhono emide, nangona kunokwenzeka ukuba ufumane idizayini emfutshane. Ifemu ibadibanisa neekawusi zoboya kunye neebhutsi zeqatha ezisicaba, unokuba nobuganga bokwenza ngolo hlobo?
Ezinye iimpahla ezibalaseleyo kule ngqokelela entsha zezi: i-cardigan edibeneyo ezidibanisa ngokugqibeleleyo kunye neengubo zombini kunye neengubo; kunye neejezi ze-turtleneck ezine-asymmetric hem. Ukongeza, akunakwenzeka ukuba ungakhangeli kwiimpahla zabo zangaphandle: iingubo zoboya, iingubo zomsele kunye neebhatyi zesikhumba ezixelisayo onokuzibona kwikhathalogu yazo.
Ngaba uyazithanda izindululo zokuqokelelwa kwe-Olive ekwindla-ebusika ngo-2021?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » fashion » Ndinxiba ntoni » Ingqokelela yomnquma ekwindla-ebusika 2021 yifumane!
Iziphazamiso zempilo ezinokuchaphazela isini seqabane
Ezona mpahla zintle zisishiyayo abantu abadumileyo kule Halloween ka-2021